Al-Shabaab oo war ka soo saaray weerarkii dadka muslimiinta ah lagu laayay ee New Zealand – War La Helaa Talo La Helaa
Al-Shabaab oo war ka soo saaray weerarkii dadka muslimiinta ah lagu laayay ee New Zealand
Afhayeenka Ururka Al-Shabaab,Sheekh Cali Maxamuud Raage, ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii wuxuushnimada ee maalintii Jimcaha ka dhacay wadanka New Zealand, kaas oo lagu dilay tobanaan ruux oo Muslimiin ah.
Cali Dheere ayaa ugu horreyn wuxuu tacsi u diray guud ahaan dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu gumaaday weeraradii lagu qaaday labada Masjid ee ku yaalay magaalada ChristChurch ee wadanka New Zealand wuxuuna Allaah uga baryay “inuu ka aqbalo intii ku shahiiday, una boog dhayo kuwa dhaawaca ah”.
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab oo soo daliishanaya nusuus sharci ah ayaa Muslimiinta ku booriyay in ay sabraan islamarkaana ixtisaabsadaan, isagoona sheegay in Al-Shabaab ay la xanuunsanayaan ehellada ay dadkooda ku dhinteen weerarkaas wuxuushnimada ahaa.
“Dhacdadaas foosha xun ee ka dhacday New Zealand waxay markale daaha ka rogeysaa colaadda gaamurtay ee ay gaaladu u qabaan Muslimiinta, waxay marag ma doonto u tahay xiqdiga saliibiga ah ee kuwaas falkaas geystay iyo kuwa kale ee gadaal ka taagan ay u hayaan dadka muslimiinta ah” ayuu yiri Sheekh Cali dheere Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab.
SAWIRRO: Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo siwadajir ah xariga uga jaray Xarunta Safaarada
FIIRSO VEDIO: Shacabka Muqdisho oo qaati ka taagan xirnaashaha wadooyinka,3-million Qof oo 1-Qof wado looga xirayo+(YAAB)